Harbour DAO စျေး - အွန်လိုင်း HRB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Harbour DAO (HRB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Harbour DAO (HRB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Harbour DAO ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Harbour DAO တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Harbour DAO များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Harbour DAOHRB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$16.15Harbour DAOHRB သို့ ယူရိုEUR€13.69Harbour DAOHRB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£12.38Harbour DAOHRB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.14.72Harbour DAOHRB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr144.33Harbour DAOHRB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.101.95Harbour DAOHRB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč357.94Harbour DAOHRB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł60.28Harbour DAOHRB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$21.38Harbour DAOHRB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$22.54Harbour DAOHRB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$360.95Harbour DAOHRB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$125.16Harbour DAOHRB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$87.78Harbour DAOHRB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1207.37Harbour DAOHRB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2719.53Harbour DAOHRB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$22.15Harbour DAOHRB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$24.55Harbour DAOHRB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿501.77Harbour DAOHRB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥112.02Harbour DAOHRB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1725.25Harbour DAOHRB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩19112.55Harbour DAOHRB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦6190.75Harbour DAOHRB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1191.88Harbour DAOHRB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴444.43
Harbour DAOHRB သို့ BitcoinBTC0.0014 Harbour DAOHRB သို့ EthereumETH0.0421 Harbour DAOHRB သို့ LitecoinLTC0.297 Harbour DAOHRB သို့ DigitalCashDASH0.178 Harbour DAOHRB သို့ MoneroXMR0.181 Harbour DAOHRB သို့ NxtNXT1259.65 Harbour DAOHRB သို့ Ethereum ClassicETC2.38 Harbour DAOHRB သို့ DogecoinDOGE4660.42 Harbour DAOHRB သို့ ZCashZEC0.196 Harbour DAOHRB သို့ BitsharesBTS497.5 Harbour DAOHRB သို့ DigiByteDGB516.71 Harbour DAOHRB သို့ RippleXRP57.36 Harbour DAOHRB သို့ BitcoinDarkBTCD0.557 Harbour DAOHRB သို့ PeerCoinPPC53.58 Harbour DAOHRB သို့ CraigsCoinCRAIG7358.47 Harbour DAOHRB သို့ BitstakeXBS688.68 Harbour DAOHRB သို့ PayCoinXPY281.93 Harbour DAOHRB သို့ ProsperCoinPRC2026.32 Harbour DAOHRB သို့ YbCoinYBC0.00868 Harbour DAOHRB သို့ DarkKushDANK5182.79 Harbour DAOHRB သို့ GiveCoinGIVE34978.85 Harbour DAOHRB သို့ KoboCoinKOBO3679.32 Harbour DAOHRB သို့ DarkTokenDT14.87 Harbour DAOHRB သို့ CETUS CoinCETI46645.08